Comment Savoir Si Quelqu'un Vous A Bloqué Sur Instagram - Winches ကလပ်
တစ်ယောက်ယောက်ကမင်းကို Instagram မှာဟန့်တားခဲ့ရင်ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ
မင်းအပိတ်ခံရတယ်လို့မင်းထင်ရင် အင်စတာဂရမ်, စိတ်မပူပါနှင့် : သင်ဟာဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာအပိတ်ခံရတဲ့ပထမဆုံးလူမဟုတ်သလိုမင်းဟာနောက်ဆုံးဖြစ်မှာသေချာတယ်.
သင်အမှန်တကယ်ပိတ်ဆို့ခံရသည်ဖြစ်စေမဟုတ်သည်ကိုပြောပြရန်နည်းလမ်းများစွာရှိသည်။, ထို့ကြောင့်မေးမြန်းရန်မတွန့်ဆုတ်ပါနှင့် !
မင်းမလုပ်နိုင်ပါ သူတို့ရဲ့ Instagram Stories တွေကိုမမြင်ရဘူး
သူတို့ကို message ပို့ရင်တောင်, သူတို့ အဲဒါကိုလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူး မဟုတ်ဘူး
သူတို တွေ့မှာမဟုတ်ဘူး မင်းရဲ့ပို့စ်တွေမဟုတ်ဘူး
သူတို တွေ့မှာမဟုတ်ဘူး အခြားပို့စ်များတွင်သင်၏ထင်မြင်ချက်များမဟုတ်ပါ
သူတို့ရဲ့ အဆက်အသွယ်ပျောက်သွားသည် (သင်သူတို့ဆီကယခင်မက်ဆေ့ခ်ျများရှိခဲ့လျှင်)
တစ်ခါတစ်ရံမှာလူတွေကသူတို့ရဲ့အကောင့်ကိုဖျက်ပစ်လိုက်ကြတယ်, သို့မဟုတ် Instagram သည်အကောင့်များကိုပိတ်ပင်သည်. ဒီလိုဖြစ်လာတဲ့အခါ, အထက်ပါလက္ခဏာများသည်တစ်စုံတစ်ယောက်ကသင့်အားတားဆီးသည့်အခါတူညီသောလက္ခဏာများရှိသည်.
စတင်ပါ သင်၏ကိုယ်ပိုင်အကောင့်မှ၎င်းတို့ကိုရှာဖွေခြင်းဖြင့်. မင်းသူတို့ကိုမမြင်ရရင်, သူတို့ကသူတို့ရဲ့ username ကိုပြောင်းသွားတာဖြစ်နိုင်တယ် ; ထို့ကြောင့်အခြားအမည်များကိုလည်းသေချာရှာပါ.
အိမ်သာ, အသုံးပြုသူအားရှာရန်သင်သူတို့၏အကောင့်ကိုသုံးနိုင်မလားဟုတစ်စုံတစ်ယောက်အားမေးပါ, ဒါမှမဟုတ်သင့်မှာအကောင့်တစ်ခုရှိရင်အခြားအကောင့်တစ်ခုကိုသုံးပါ.
ရှာဖွေပါ အကောင့်နှင့်အခြားအသုံးပြုသူ၏အကောင့်တွင်ပေါ်လာလျှင်, သင်အပိတ်ခံထားရမည့်အခွင့်အလမ်းများ.
ကံမကောင်းစွာနဲ့ပဲ, ဒီအခြေအနေမှာလုပ်စရာအများကြီးမရှိဘူး, အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းစနစ်သည်အခြားသူများကိုပိတ်ထားသောအသုံးပြုသူများကိုကာကွယ်ရန်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်, မှန်ပါသည်. ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ, မင်းမတော်တဆအပိတ်ခံရတယ်လို့မင်းထင်ရင်, ပြီးတော့ဒါကမင်းသိတဲ့သူတစ်ယောက်ပါ,aကိုဆက်သွယ်ပါ အခြားလူမှုမီဒီယာပလက်ဖောင်း သူ့ကိုမေးပါ.
ရံဖန်ရံခါ, ဒါဟာအမှားတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပြီးအရာအားလုံးအဆင်ပြေပါတယ်, သူတို့ကသူတို့ဘက်မှာမင်းကိုပိတ်ဆို့ထားနိုင်တယ်. သို့သော်၎င်းသည်တကယ့်ပိတ်ဆို့မှုဖြစ်ခဲ့လျှင်, ဤအရာသည်မှန်ရာကို ချ၍ မှားသည်ကိုရှာဖွေရန်သင်၏အခွင့်အလမ်းဖြစ်သည်. သင်ထိုလူအားစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေလျှင်အနှောင့်အယှက်ပေးကြောင်းသတိရပါ, သူမမှာဒီလိုလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်၊ မင်းအပိတ်ခံရဖို့ထိုက်တန်ပါတယ်.
သင့် iPhone တွင် Instagram ဗီဒီယိုများကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်နည်း :3Méthodes Et Applications
ယခင်ဆောင်းပါးInstagram တွင် Influencers များအားမည်သို့ဆက်သွယ်ရမည်နည်း
နောက်ဆောင်းပါးInstagram ကငါ့ကိုဝင်ခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ဘူး : ပြုပြင်လမ်းညွှန်